युगसम्बाद साप्ताहिक - नेपालको मौलिकतामाथिको नियोजित प्रहार : यादब देवकोटा
Monday, 04.06.2020, 01:01pm (GMT+5.5) Home Contact
नेपालको मौलिकतामाथिको नियोजित प्रहार : यादब देवकोटा
Friday, 03.23.2012, 03:19pm (GMT+5.5)
नेपालको स्वतन्त्र अस्तित्व र मौलिक संस्कृति मेटाउन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाटा षड्यन्त्र भैरहेको कुरा आम जनतालाई जति ज्ञात छ त्योभन्दा बढी राजनीतिक तहलाई भए पनि उनीहरू यसबारे चुँ पनि गर्न सक्दैनन् । विदेशीकै इशारा, निर्देशनमा एकपछि अर्को गलत निर्णय गर्न पुगेका नेताहरूले विगतमा गरेको गल्ती सच्याउनसक्ने हिम्मत पनि देखाउन सकेका छैनन् । गरिबी, अशिक्षा र अभावलाई उपयोग गर्दै मुलुकमा धर्म परिवर्तनको लहर नै चलिरहेको छ । पछिल्लो समय पूर्वी पहाडी जिल्लामा गरिबीको उपहास गर्दै धर्म परिवर्तनका लागि रोजगारीको प्रलोभन दिएर अभियान छेडिएको समाचार सार्वजनिक भएको छ । त्यो समाचार विवरणले ‘इसाईहरू एउटा हातमा तरबार र अर्को हातमा रोटी लिएर हिंड्छन्’ भन्ने आरोपलाई पूर्णतः पुष्टि गरिदिएको छ ।
नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को “धर्म सम्बन्धी हक” महलमा “प्रत्येक व्यक्तिलाई प्रचलित सामाजिक एवं सांस्कृतिक परम्पराको मर्यादा राखी परापूर्वदेखि चलिआएको आफ्नो धर्मको अवलम्बन, अभ्यास र संरक्षण गर्ने हक हुनेछ । तर कसैले कसैको धर्म परिवर्तन गराउन पाउने छैन र एक अर्काको धर्ममा खलल पार्ने गरी कुनै काम, व्यवहार गर्न पाइने छैन ।” भनिएको छ । जवर्जस्ती प्रलोभन दिएर धर्म परिवर्तन गराउने गैरकानुनी काम भए पनि त्यस्ताहरूउपर कार्बाही गर्ने हिम्मत कसैले राखेका छैनन् ।
व्यक्तिले स्वैच्छाले जुनसुकै धर्म धारण गर्न पाउँदछ तर करकाप, प्रलोभनमा पारेर धर्म परिवर्तन गराउन हुँदैन । संविधानले यसै भन्छ तर अहिले यस्तै प्रवृत्तिमा बढोत्तरी आइरहेको छ । न्याय, समानता र अधिकारको नाममा मुलुकको सहिष्णुतामाथि ठूलो खेलवाड भैरहेको छ । संविधानसभामा रहेका आधाजसो सभासद्हरू अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको नियन्त्रणमा रहेको कुरा पनि बेलाबलामा चर्चामा आउने गरेको थियो । धर्म निरपेक्ष राष्ट्र हुनुको अर्थ मुलुकमा इसाई धर्मावलम्बीको संख्या बढाउनु पक्कै होइन । तर जनचेतना र सामाजिक कार्यका नाममा त्यस्तै काम भैरहेको छ । नेपालको मौलिक–धर्म संस्कृतिमाथि डलर र पाउण्डले प्रहार गरिरहेको छ ।
यस्तो कार्यलाई मानवअधिकार हनन्को श्रेणीमा राखिन्छ तर मानवअधिकारको ठेकेदार मुलुकबाटै त्यस्तो काम भैरहेको हुँदा कसले आवाज उठाउने रु कसैको आस्था र विश्वासमा आँच पु¥याएर जवर्जस्ती गर्नु गम्भीर मानव अपराध हो । नेपालमा शिक्षाको नाममा, स्वास्थ्यको नाममा, विकासको नाममा गरिब ग्रामीण बासिन्दालाई इसाई धर्मावलम्बी बनाउने गरिन्छ । यसले अब नेपालको मौलिक चिनारी विस्तारै धुमिल भएर “मन्दिरै मन्दिरको देश” “चर्च नै चर्चको देश” बन्ने अवस्था सिर्जित हुँदैछ । यसको एउटा सानो नमूनाको रुपमा तलका तथ्यलाई लिन सकिन्छ ।
एक दशको बीचमा नेपालमा इसाई धर्मावलम्बीको संख्या तीन गुणा बढेको छ । जुन नेपालको जनसख्ंया वृद्धिदरभन्दा धेरै बढी हो । जसरी नागरिकता वितरणपछि तराईको जनसंख्यामा एकाएक बढोत्तरी आएको थियो, धर्म निरपेक्ष राष्ट्रको घोषणापछि इसाई धर्मावलम्बीहरूको संख्या सोही अनुपातमा बढेको छ । २०५८ सालको जनगणनामा ०।५ प्रतिशतमा रहेका इसाई धर्मावलम्बी २०६८ सालसम्म आइपुग्दा १।५ प्रतिशतभन्दा बढी रहेको छन् । यो संख्या वि।सं। २००७ सालअघि ०।०५ प्रतिशत रहेको थियो । नेपालमा प्रजातन्त्र प्राप्तिसंगै खुला सामाजिक वातावरण र कतिपय कानुनी प्रावधानहरू खुकुलो हुनु, पद र प्रतिष्ठाका लागि रुपैयाँ पैसाको खेल हुनु, विकासका नाममा धर्म प्रचारकहरूलाई विनाशर्त नेपाल भित्र्याइनु जस्ता कारणहरूले नेपालमा डरलाग्दोसंग इसाई धर्मावलम्बीहरूको संख्या बढिरहेको छ ।
एक वर्षअघि सार्वजनिक भएको एउटा तथ्यांक अनुसार नेपालमा इसाईकरण सुनामीकै बेगमा अघि बढिरहेको छ । २०१९ सालमा नेपालमा चर्चको संख्या केवल दुईवटा थियो भने २०४६ सालसम्म आइपुग्दा २ सय ९२ पुग्यो । २७ वर्षको बीचमा २ सय ९० वटा चर्च थपिए । जुन स्वाभाविक मान्न सकिन्न । तर २०४६ सालको परिवर्तन लगत्तै अर्थात् २०४६–०५९ सालसम्ममा चर्चको संख्या १ हजार ८ सय ३९ पुग्यो । अहिले आएर त्यो संख्या आठ हजारभन्दा बढी पुगिसकेको छ । २०४६ देखि १३ वर्षको बीचमा १६ सयभन्दा बढी चर्च थपियो भने त्यसपछिको एक दशक पनि नपुग्दै त्यो संख्या ८ हजार नाघ्यो । नेपालमा चर्चहरूको खुल्ने क्रम वार्षिक १२ प्रतिशतभन्दा बढीका दरले वृद्धि भैरहेको जानकारहरू बताउँछन् ।
यस्ता तथ्यांक र सूचनाहरूले दिने सन्देश भनेको नेपालको राजनीतिक परिवर्तन नेपाली जनताका लागि होइन । आयातित नारा भट्याएर नेपाली जनताको परिवर्तनको आकांक्षालाई जसको जे चाहना थियो लोकतन्त्र–गणतन्त्रले त्यही चाहनामा मलजल गरेको प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ । नेपाललाई जसरी धार्मिक–सांस्कृतिक रुपमा तहसनहस पार्नु थियो त्यो अभियानमा विधर्मीहरू सफल हुँदै गैरहेका छन् । सदियौंदेखि चलिआएको धार्मिक–सांस्कृतिक–सामाजिक सद्भाव त खल्बलियो नै अब मुलुकको मौलिक पहिचान समेत मेटिने अवस्था सिर्जना हुन थालेको छ । लोकतन्त्रपछि नेपाललाई धर्म निरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गर्न नेपालमा सक्रिय इसाई धर्मगुरुहरूको आग्रह रहेको कुरा महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेका नेताहरूले नै बताउने गरेका छन् । हिन्दु धर्म–संस्कृतिमाथि सधैं वक्रदृष्टि लगाउने इसाईहरू विश्वलाई नै इसाईकरण गर्ने अभियानमा कम्मर कसेर लागिपरेका छन् । उनीहरूको यो अभियानलाई सफल पार्न वैदिक सनातन हिन्दु धर्मलाई कमजोर पार्नैपर्ने आवश्यकता रहेको छ । यसैकारण उनीहरू ‘एक हातमा तरबार र अर्को हातमा रोटी बोकेर’ लोभ, डर, धम्की दिंदै धर्म प्रचारको अभियानलाई तीब्र बनाइरहेका छन् ।
कुनै पनि मुलुकको मौलिक पहिचान हुन्छ । हाम्रो पहिचान धार्मिक सहिष्णुता, सामाजिक सद्भाव र चार वर्ण छत्तीस जातको साझा फूलबारी हो । जसबाट सधैं सुवास मग्मगाइरहेको थियो, अहिले त्यही सुवासयुक्त समाजबाटमा विद्वेषको दुर्गन्ध फैलिएको छ । राजनीतिक नेतृत्वको गलत सोच तथा प्रतिशोेधी व्यवहारले गर्दा मुलुक आफ्नो अस्तित्व विलीनको अवस्थामा पुगेको छ । अहिले चर्चको संख्या जे जसरी वृद्धि भएको छ यसले अर्को एक दशकमा मन्दिरै मन्दिरको देश नेपाल चर्च नै चर्चको देश भनेर भन्नुपर्ने अवस्था आउने खतरा बढेको छ । कुल जनसंख्याको ८५ प्रतिशतभन्दा बढी हिन्दु धर्मावलम्बी रहेको मुलुकमा हरेक वर्ष इसाई धर्मावलम्बीको संख्यामा व्यापक बढोत्तरी आउने छ । धार्मिक–सांस्कृतिक अतिक्रमणको यो डरलाग्दो तीब्रवेगले मुलुक कस्तो दुर्नियतिको शिकार हुनुपर्ने हो भन्ने चिन्ता अहिले जागृत हुन थालेको छ ।
नेपालमा २०४६ सालको परिवर्तनपछि इसाईकरणको अभियान तीब्र भएको हो । यसको पुष्टि प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि बनेका चर्चको संख्याले नै गर्दछ । अझ लोकतन्त्र प्राप्तिपछि नेपाल धर्म निरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरिनु “इसाई धर्मावलम्बीहरूकै चाहना र आग्रहको सम्मान गरिएको” बताइन्छ । सबैलाई ज्ञात नै छ । मुलुकमा सबै जात–धर्म, सम्प्रदाय र क्षेत्रका मानिसहरूबीच जुन किसिमको सौहार्दता र सहिष्णुता थियो अब त्यो रहेन । जनतालाई अधिकार दिने नाममा धर्म परिवर्तन मात्र होइन नेपालको मित्र राष्ट्रहरूसंगको सम्बन्धमै खलल पु¥याउने कुचेष्टा हुन थालेको छ । विश्वको दोस्रो ठूलो आर्थिक शक्ति चीनको उपस्थिति र प्रभावलाई विश्व मञ्चमा कमजोर तुल्याउन सो मुलुकमा अस्थिरता सिर्जना गर्नु एकमात्र रणनीति बुनेका पश्चिमा मुलुकहरूले नेपालमा इसाइकरणको बाढी नै हुलेर त्यसमार्फत चीनतर्फ सो अभियान चलाउने र चीनमा धार्मिक विद्वेष फैलाउने दीर्घकालीन रणनीति बनिरहेको आरोप मित्थ्या मान्न सकिन्न । तिब्बती शरणार्थीलाई उनीहरूले गरिरहेको सहयोग र नेपालमाथि कथित ‘फ्रि तिब्बत’ गतिविधिलाई नरोक्न दिइरहेको दवाव पनि यसैसंग जोडिएर आउँछ । त्यसै भएर धर्म परिवर्तनको डरलाग्दो वेग रोक्न हिन्दु–बौद्ध धर्मले संयुक्त अभियान चलाउनु पर्दछ ।
नेपालको मौलिकता मेट्न सकेमा पश्चिमा मुलुकहरूले धेरै ठूलो युद्ध जितेको अनुभव गर्नेछन् । किनभने नेपालबाट हिन्दु र बौद्ध धर्मलाई कमजोर पार्नसके त्यसको ठाउँमा इसाई धर्मलाई स्थापित गराउने र चीन लगायत एसियाका हिन्दु र बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको बाहुल्यता रहेको देशमा इसाईकरणको झण्डा गाड्ने दीर्घकालीन रणनीति पश्चिमा मुलुकहरूको छ । पहिला धर्म निरपेक्ष राष्ट्रको पक्षमा उभिएको भारत नेपालसंगै आफ्नो ‘हिन्दुस्तान’को परिचय पनि मेटिने खतरा देखेर अहिले नेपाल हिन्दु राष्ट्र कायम हुनुपर्छ भन्ने मान्यतामा अडिन थालेको छ ।
राष्ट्रिय हितका लागि चालिनुपर्ने कदमहरू विदेशीहरूको स्वार्थपूर्तिका लागि चालिन थालेका छन् । समाजमा अग्रज भनिनेहरू विदेशीले रटाइदिएको सुगा रटानमा लठ्ठ छन् । आफ्नोपन बिर्सदै विदेशीकै रहनसहनमा अग्रसर भैरहेको छ नेपाली समाज तर आर्थिक–सामाजिक विकासमा भने विदेशीको सिको पटक्कै गर्न नसक्ने र व्यक्तिगत स्वार्थका लागि राष्ट्रघाती निर्देशनहरू सहर्ष स्वीकार गर्ने प्रवृत्ति बढिरहेको छ । त्यसै भएर नेपाल दिन प्रतिदिन विदेशी प्रभावमा पर्दैछ । राजनीतिमा त विदेशीको निर्देशनवेगर केही हुनै नसक्ने जगजाहेर विषय बनिसक्यो । अब धार्मिक–सांस्कृतिक क्षेत्र पनि त्यस्तै अवस्थाको सामना गर्न विवश हुनुपरेको छ ।
२०६३ अघिसम्म नेपाल हिन्दु अधिराज्य थियो, तर सबै धर्मावलम्बीहरूबीच सहिष्णुता थियो । के हिन्दु, के बौद्ध, के इसाई, के मुसाई सबैले सबैलाई समान रुपमा सम्मान गर्दथे । तर अहिले मुलुकलाई धर्म निरपेक्ष राष्ट्र बनाइएको छ । यसको परिणाम अहिले धर्म परिवर्तनको तीब्रवेग चलेको छ । मुलुकमा इसाईकरणको बाढी नै आएको छ । धर्म निरपेक्ष राष्ट्र नेपाली जनताको नारा थिएन । यो नारा अरुले नै लादिदिएका थिए र उनीहरूकै स्वार्थका लागि त्यस्तो घोषणा गरिएको थियो । विदेशीले सिकाइदिएको नारा भट्याएर मुलुकमाथि घात गर्ने राजनीतिक नेतृत्वका कारण मुलुक आफ्नो मौलिकताबाट विमुख हुन थालेको छ । प्रजातन्त्र र नागरिक स्वतन्त्रताका नाममा राष्ट्रिय परिचय नै निमिट्यान्न पार्न उद्यत हुनेहरूले प्रजातन्त्र र मानवअधिकारको नाममा विदेशी स्वार्थ आयात नगरेका भए मुलुक धार्मिक–सांस्कृतिक रुपमा यति कमजोर र भताभुङ्गको अवस्थामा पुग्ने थिएन ।
हरेक परिवर्तनले विदेशी स्वार्थलाई दह्रोसंग टेकोदिने काम गरेको छ । जनआन्दोलन–२ ले भारतीय स्वार्थ र पश्चिमा मुलुकको इसाईकरणको अभियानलाई वैधानिकता दिने काम ग¥यो । तर विडम्वना त के भने नेपाल धर्म निरपेक्ष राष्ट्र हुनुपर्छ भनेर नेपालको मौलिक धार्मिक–सांस्कृतिक पहिचान मेट्न चाहने मुलुक स्वयं भने धर्म निरपेक्षताको नाममा कुनै एक धर्म विशेषलाई आफ्नो मौलिक धर्म मान्ने गर्दछन् । पश्चिमा राष्ट्रका नेताहरू नेपाल जस्ता गरिब देशमा धर्म निरपेक्षताको अर्थ र परिभाषा नै बदल्ने गरेका छन् । उनीहरू ‘बाइबल’ छोएर शपथ खान्छन् भने अरुलाई कुनै एक धर्मको पछि लाग्नुहुन्न भन्दै उपदेश दिने गरेका छन् । ‘भ्याटिकन सिटी’लाई धार्मिक राष्ट्रको रुपमा मान्यता दिने संयुक्त राष्ट्रसंघ नेपालजस्तो विश्वका अर्बौ हिन्दुहरूको पवित्र भूमिलाई हिन्दु राष्ट्रको रुपमा मान्यता दिनुपर्छ भन्न सक्दैन । स्वयं नेपाली शासकहरू पनि आफ्नो मौलिकता बेचेर सत्ता शिखरमा बसिरहने लालचमा छन् । मुलुक विस्तारै इसाईकरणको दलदलमा फस्दै गएको छ ।
अझै समय बितिसकेको छैन । अहिलेको एक मात्र दायित्व भनेको धर्म निरपेक्ष वा सापेक्षको मुद्दामा केन्द्रीत नभएर मुलुकको मौलिकपनको रक्षाको हो । राष्ट्रिय पोशाकमा हिनताबोध गर्ने, राष्ट्रिय धर्ममा हिनताबोध गर्नेहरूले आयातित धर्म–संस्कृति र पोशाकमा रमाउनु आश्चर्यको विषय हैन । यस्ताहरूको जगजगी सधैं कायम हुँदैन । समय छँदै जिम्मेवारहरूले नसोच्ने हो भने उनीहरूमाथि घोर राष्ट्रघातको आरोप लागिरहनेछ । उनीहरूको इतिहासमा कालो दाग लाग्नेछ । अहिलेको आवश्यकता नेपालको अस्तित्व र नेपालीपनको रक्षाको हो, धर्म परिवर्तनको वेग रोक्नु हो र सामाजिक–धार्मिक सहिष्णुता कायम गर्नु हो । सापेक्ष र निरपेक्षको विषयले राजनीतिक रंग पाएपछि धार्मिक विद्वेषको संकेतहरू देखिइसकेका छन् । यसलाई रोक्न सकिएन भने मुलुकमा धार्मिक अराजकताको विजारोपण नहोला भन्न सकिन्न । समय छँदै गरिएको उपचारले मात्र काम गर्छ । नेताहरूले बुझ्नुपर्ने एउटै कुरा के हो भने भाषण गर्दा जहिले पनि हिन्दु धर्मशास्त्रका पात्रहरूको उद्धरण गर्ने तर सोही धर्म समाप्त पार्न उद्यत हुने हो भने उनीहरूको पनि अस्तित्व रहँदैन । धर्म माने पनि नमाने पनि सबैको शरीरमा हिन्दु धर्म संस्कृतिकै प्रभाव छ । त्यसैले नेपालीको जीवनसंग गहिरो सम्बन्ध भएको हिन्दु धर्म–संस्कृतिको जगेर्ना गर्नेतिर सबैको ध्यान जाओस् ।
माओवादी किन जंगल फर्किदैनन् ? तारा सुवेदी (03.23.2012)
संविधानको लोहोरो कहिले पाक्छ खै ? : महेश्वर शर्मा (03.23.2012)
महिला दिवस : नारा, भाषण र क्षुद्र आलोचना हैन, नतिजा चाहिन्छ - यादब देवकोटा (03.12.2012)
कठीन छैनः न्यायिक सुद्धीकरण, सुदृढीकरण र सवलीकरण गर्न : तारा सुवेदी (03.12.2012)